Shiinaha Alaabooyinka Cusub Qolka Fadhiga Gig Round Casriga Led Casaan Saqafkii Midab Beddelaya Soo saare iyo Soo-saare | Aina
Alaabooyin Cusub Qolka Fadhiga Gig Round Casriga Led Beenta Saqafka Midab Beddelida
1, Qeybta ilaaliyaha ilaaliyaha: lumen sare, naqshadeynta muraayadaha, iftiinka dheelitirka badan iyo aagga mugdiga ah.
2, shaqeyn heer sare ah: Nooca heerkulka midabka, 3000k-6000k nooca xakamaynta fogaanta, ikhtiyaarka nooca radar.
3, Wattage oo dhameystiran: heerka 12W-60W, u habee ikhtiyaarka watt.
4, Isticmaal maaddo heer-sare ah: Jaranjaro u adkaysata daxalka, dabool akrilik tayo sare leh.
Ilaha iftiinka: Nalka tayada sare leh, iftiinka sare, qiimaha kalooriga oo hooseeya, iftiinka ilaalinta indhaha, muujinta midabka sare
Iftiinka iftiinka sare ee loo yaqaan 'acrylic transmittance acrylic': iftiinka sare ee qalabka acrylic-ka, samee iftiin jilicsan oo isku mid ah, keydinta tamarta iyo cimri dhererkiisa.
Qalabka: Isticmaal alaabada birta ah ee tayada sare leh, oo lagula macaamilay habab badan oo dusha sare ah oo ka samee muuqaal sare.
Waxaan heshiis la leenahay shirkadaha waaweyn ee saadka, waxaanan hubineynaa inaan bixin karno kharashka ka yar bixinta ee shirkadaha kale. Meanwell, waxaan ku siin karnaa qorsheyaal kaladuwan oo macquul ah ikhtiyaariyada macaamiisha.
Qaar kale Adeeg
1.Waayo dhammaan baaritaankaaga ku saabsan annaga ama alaabadayada, waxaan si faahfaahsan kuugu soo jawaabi doonnaa 24 saacadood gudahood.
Waxaan haynaa turjumaad wanaagsan, iibin xamaasad leh iyo adeeg si fiican ugu hadli kara luuqada Ingiriiska.
3.Qof xirfadle ah ayaa kula soo xiriiraya ka hor amarka.
4.Provde adeeg dhameystiran iibka kadib, oo ay kujiraan rakibida, hagaha farsamada.
5.Provde tayada adag ee qayb kasta, geeddi-socod kasta kahor dhoofinta.
6.OEM & ODM, sidoo kale waxay bixiyaan adeeg habeysan.
Hore: Qolka jiifka 24w 36w Midab Beddelida Xakamaynta Remote Dimmable Acrylic Cover Wareegtada Laydhka Laydhka
Xiga: Wareeg fudud Nalalka Saqafka Dhimista Saqafyada Nalalka LED-ka ee Restaurante
Nalalka Saqafka Sare ee Wareegga Nalalka Nalalka ...
Nalalka Gaarka ah Naqshadaynta Nalalka 24W / 36W / 40W / 60W
Gudaha Round hoggaamiyo Saqafka Light Surface Fuulay ...
Nalalka saqafka oo leh nashaad dabool kala duwan